‘बोल्ड एण्ड ब्युटिफुल’ एलिना रायमाझी, हेरौं १० तस्विर
२०५५ सालमा अर्घाखाँचीमा जन्मिएकी एलिना रायमाझी मोडलिङ र फिल्ममा जम्ने लक्ष्यसाथ ६ वर्षअघि राजधानी आएकी हुन्। धुम थ्री र हिरो नं. १ मा नायिकाका रूपमा खेलिसकेकी रायमाझीले लगभग २ सय ५० वटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छन्।
केही समयअगाडी राजधानी दैनिकमा उनको अन्तरवार्ता छापिएको थियो । उक्त अन्तरवार्ताको केही अंश
बिहेबारे केही सोच्नुभएको छ?
विवाहबारे अहिले केही सोचेकी छैन। भोलिका दिनमा मलाई बुझ्ने मान्छे आए विवाह गर्न चाहन्छु।
तपाईं कस्तो जीवनसाथी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ?
मलाई मेरो परिवारलाई पनि बुझ्ने केटा जीवनसाथी होस् भन्ने चाहन्छु। जसले मलाई रुवाउने काम नगरोस्। ग्लामर क्षेत्रलाई छोड नभनोस्।युवायुवतीबीच हुने प्रेम कस्तो लाग्छ? राम्रै लाग्छ, म प्रेम गरेरै विवाह गर्छु। त्यो भयो भने बुझ्न पाइन्छ।
तपाईंलाई प्रपोज गर्ने कति आए ?
मलाई प्रपोज गर्ने १ हजार जति आए होलान्। म्यासेजमा कहिले विवाह गर्ने बूढी भनेर जिस्क्याउँछन्।तपाईंलाई कस्ता केटा मन पर्छन्? सफा, हेन्डसम, स्मार्ट, नरम र सबैको इज्जत गर्ने व्यक्ति मन पर्छ। तर अहिलेको जमानामा माया र इज्जत गर्ने धेरै पाइँदैनन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले दैनिक नयाँ नयाँ तस्विरहरु राख्ने गर्दछिन् ।
आज भने हामीले उनका केही सुन्दर तस्विरहरु राखेका छौं ।